Uyifaka njani iPC yakho nge-UPS
I-UPS imele unikezelo lwamandla angenakuphazanyiswa, kwaye i-UPS yeyona nto ifanelekileyo oyisebenzisayo ukukhangela inkqubo yekhompyuter yakho kwisokethi eseludongeni. Ngokusisiseko, i-UPS sisixhobo samandla esidityaniswe nebhetri. Ingagcina ikhompyuter yakho isebenza xa umbane ucima.
i-ibuprofen yegazi elincinci njenge-aspirin
Umbono ngasemva kwe-UPS ayikokugcina ikhompyuter ngelixa amandla ephumile. Endaweni yokuba i-UPS yenzelwe ukugcina izinto ezisisiseko zekhompyuter- ikhonsoli kunye nokubeka iliso-kwaye isebenze ixesha elide ngokwaneleyo ukuba ugcine umsebenzi wakho kwaye ucime ikhompyuter ngokufanelekileyo. Ngale ndlela, awusoze ulahlekelwe yiyo nantoni na ngenxa yokuphela kombane.
Eli nani libonisa indlela efanelekileyo yokuseta inkqubo yekhompyuter yakho nge-UPS kunye nombane wamandla. (Ayiboniswanga intambo ye-USB, esetyenziswa kwezinye iinkqubo zeUPS ukwazisa ikhompyuter malunga nokucinywa kombane.)
Ngaba ucofa ulusu ngenaliti ye-im
Shiya iUPS ngalo lonke ixesha. Kuya kufuneka ucime kuphela emva kokuphuma kombane kwaye ikhompyuter ivaliwe ngokufanelekileyo.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-midodrine
uqhagamshela njani imigca yokubonelela ngombhobho
Itshathi yenqanaba labantwana benadryl
Wenza ntoni lopid
isetyenziselwa ntoni ialprazolam
zingaphi izikhundla zekhabhinethi ezikhoyo
ip207 ipilisi emhlophe embhoxo